R/wasaaraha XFS iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u ambabaxay Itoobiya – Banaadir Times
R/wasaaraha XFS iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u ambabaxay Itoobiya
By banaadir 18th March 2020 26
R/Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Hassan Cali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminaayo ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho,iyagoo u ambabaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Wafdiga R/wasaaraha oo ay garoonka diyaaradaha ku sii sagootiyeen xubno ka tirsan dowladda,waxa ay kulamo la xiriira xoojinta xiriirka labada dal la yeelan doonaan madaxda dalka Itoobiya qaar ka mid ah xubnaha safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi .
Safarka raisalwasaaraha Soomaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo kiiskii ugu horeeyay ee Corono-Virus laga helay Soomaliya halka Itoobiyana laga helay 2kiis iyo kabadan.
Shil Sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Galgaduud.
Raisal wasaaraha Soomaliya oo la kulmay dhigiisa Itoobiya.
Akhriso Warsaxaafadeed laga soo saaray kulanka Golaha Wasiirada Puntland